Ejipta: Mitohy ny firavoravoana noho ny fametraham-pialàn’i Mubarak · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Mitohy ny firavoravoana noho ny fametraham-pialàn'i Mubarak
Voadika ny 12 Febroary 2011 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Português, Français, Italiano, 日本語, English
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitra manokana ataonay mikasika ny Hetsi-panoherana Ejipta 2011.
Mitohy ny firavoravoana manerana izao tontolo izao taorian'ny vaovao nilaza fa nandao ny tanàna i Hosni Mubarak. Ilay mpanao jadona, izay nifehy an'i Ejipta nandritra ny taompolo telo, ary nandà ny hametra-pialàna tao anatin'ny 18 andro nisian'ny hetsi-bahoaka tsy nitsahatra nanehoan'ireo Ejiptiana ny fangatahan-dry zareo ny hialàny amin'ny fitondràna amin'ny fomba faran'izay milamina, dia niala ihany nony farany.
Ireto ireo fantina farany tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter:
@AmoonaE: #mubarak ███████████████|100 % vita matavy. Ankehitriny dia azonao tsoahana amin'ny solosainao amin'izay ity. #jan25 #18days #egypt #victory (via @hissar_simo)
@Lastoadri: Ny sainam-pirenena eny an-tànana ary ety anaty arabe aho mankalaza miaraka amin'ny vahoakako… YAAAAY! #Egypt #Jan25
@3arabawy: Antso an-telefaona avy any Hurghada: Nivoaka hankalaza eny an-dalambe daholo ny olona rehetra. #Jan25
@3arabawy: Latsaka ny ranomasoko. Niriako indrindra raha mba velona teto hahita izao andro izao ny raiko. #Jan25 http://www.flickr.com/photos/elhamalawy/2585826704/
@3arabawy: Mitohy mirefodrefotra ny poa-basy ato an-tananan'i Nasr ho fankalazana. Tsy nampoiziko velively ho feno basy poleta betsaka toy izany teto amin'ny manodidina! 😀 #Jan25
@3arabawy: Mila manàla ireo teritery rehetra amin'ny fahafaha-manangana sendika sy antoko politika isika. #Jan25
@3arabawy: Ilaintsika ny manenjika ireo mpamono olona & ireo manampahefana mpanao kolikoly nifehy antsika. Mila mandrava an'io parlemanta sarintsariny io isika. Mila manafoana ny lalànan'ny tany misahotaka isika.
@3arabawy: Fandresena goavana no azon'ny tsirairay amintsika. Saingy tsy tokony hatsahatra ny hetsika sy fitokonana mandrapaha-tanteraky ny ambin'ny fitakiantsika. #Jan25
@dohanews: kipantson'ny fankalazana eny an'araben'i #qatar. Mabrook #egypt!
@fahadalassiry: Fiara any #Doha #Qatar manofahofa ny sainam-pirenena Ejiptiana. Fankalazana re izao! #Egypt #Jan25 http://twitpic.com/3yop4m
@yslaise: Hividy finday roa aho, ny iray i Mohammed Bouazizi no ho sary lafika ary ilay iray hafa dia ny tao #Tahrir #Jan25 #sidibouzid
@yslaise: Misaotra anareo ry Bouazizi, Khaled Said ary ry tanoran'i Tonizia sy Ejipta, nanome ahy tantara hampianariko an-janako lahy mikasika ny fanaovana sorona ny tena, ny firaisankina ary ny fahafahana
@razano: Tao amin'ny masoivoho Ejiptiana tao amman, fankalazana 🙂 tongava hiaraka aminay re ry vahoaka! Lasa izao #Jan25
@Tharwacolamus: Mankalaza koa ireo Jordaniana ao Amman, eo anoloan'ny Masoivoho Ejiptiana ihany koa #jan25
@ioerror: Taorian'ny vao ambinifolo andro nihetsehana dia nambara fa niala i Mubarak! Tazony hatrany ny tsindry – hanesorana ireo sisa ao amin'ny fitondrana! #egypt
@ShereefAbbas: Ny ilaina ataontsika izao dia ny mipetraka miaraka amin'ireo Toniziana & manoratra ny boky “Fanilihana ny Mpanao Jadona ho an'ny Bado” . #Jan25 #Egypt #Tunisia
@AShMarafi: Ho an'ireo vahoaka Ejiptiana: Eny, Azontsika Atao #Jan25 #25Jan http://yfrog.com/hse03hlj